Thursday December 10, 2015 - 01:01:40 in Wararka by Xarunta Dhexe
Gabar Soomaali ah oo reer Linköping ah ayaa isbuucaan lagu xiray wadanka Austria ka dib markii looga shakiyay in ay ku sii jeedo wadanka Syria oo ay doonayso in ay ku biirto ururka ISIS ee ka dagaalama wadankaasi. Booliska Austria ayaa ku guuley
Gabar Soomaali ah oo reer Linköping ah ayaa isbuucaan lagu xiray wadanka Austria ka dib markii looga shakiyay in ay ku sii jeedo wadanka Syria oo ay doonayso in ay ku biirto ururka ISIS ee ka dagaalama wadankaasi. Booliska Austria ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan gabadhaan iyagoo isticmaalaya signalka telefoonkeeda.
Booliska ayaa sheegay in qaraabada gabadhaan ay ka shakiyeen in ay xagjir noqotay inta aan la waayin maal ay jaan iyo cirib dhigtay. Familka ayaa sheegay in gabadhaan ay bilowday daawashada muuqaalada jihaadka ee ay soo sameeyeen ururka ISIS isla markaana ay muujisay hadalkeeda in ay taageersantahay ururkaas oo loo arko mid argagixiso.
Gabadhaan ayaa la sheegay in ay ku dhalatay oo ku barbaartay Sweden, iyadoo la yaab noqotay sida ay ku noqotay xagjir doonaya in ay ku biirto dagaalada lagu dhamaaday ee ka socda wadanka Syria. Ma ahan qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ay u safarto Syria, iyadoo horey ay u bexeen gabdho Soomaaliyeed oo ka tagay Stockholm iyo wiil dhowr ah oo ka baxay daafadaha Sweden. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee u safartay Syria ayaa ku dhintay dagaalada halka qaar kale ay ku xayiranyihii oo aysan soo laaban karin.